Black Desert Mobile dia mahazo ny fiakarana an-dakilasy | Androidsis
Nanambara izany i Pearl Abyss Class Ascension dia misy amin'ny Black Desert Mobile izao, kinova finday misy ny anaram-boninahitra nomena ny orinasa. Hahafahan'ireo mpampiasa manokatra fahaiza-manao vaovao mahery izy io, noho izany dia azon'ny kilasy rehetra ampiasaina izy io.
Ireo mpitsangatsangana izay mahatratra ny haavo 60 dia afaka manomboka amin'ny fikarohana izay hanampy azy ireo hanana fahaiza-manao vaovao. Misy totaliny dimy mandra-pahatongany amin'ny ambaratonga 70, izay ilaina ny manampy iray hafa rehefa tonga any amin'ny ambaratonga, noho izany dia omena valisoa ireo izay mampiasa tsy tapaka ny lalao ho an'ny rafitra Android.
Ela be talohan'ny fiakarana, ny fahaizan'ny toetran'ny kilasy tsirairay avy dia nampiana mba hamaritana ny fanafihana, ny fiarovana ary koa ny fahasalamana. Ny hazo fahaizana Ascension izao dia tsy mitovy amin'ny rafitra fototra, mampihatra ny fahombiazana sy ny fahaizana manatsara ny kilasy voafantina.
Ankoatra izany Ny fiakarana dia ho hita ao amin'ny Alchemical Stones, entana azo oharina izay hanome tombony amin'ny fampitomboana ireo teboka fanafihana sy fiarovana. Hanana tombony ambony kokoa isika amin'ny fahazoana ireo Volafotsy sy vato maizimaizina eny an-tsahan'ady, ary koa ny fahefana hampisondrotra fitaovam-piadiana sy fitaovana.
Ny Adventurer dia manana ny fahafaha-mitatitra ny Alchemical Stones izay tadiavin'izy ireo, fa ny iray kosa azo omena fitaovana fa tsy misy intsony. Mila ampidirinao ao anaty menio radial ny vato alkimika mba hamelomana ireo tombony azo, azo alaina ao amin'ny Rava Fahagola izy ireo na amin'ny fanamboarana azy miaraka amin'ny sombin-kazo alchemika ao amin'ny Laboratoara Alchemy.
Fanavaozana izay tonga
Fitaovana finday mainty efa nahazo ny zava-dehibe "Nofy ratsy: Gua Lava an'i Omar" fanavaozana, efa misy, ho fanampin'izay azontsika atao mifaninana amin'i Nouver, lehiben'ny tontolo vaovao. Natomboka tamin'ny volana febroary izy roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Black Desert Mobile dia mandray ny fiakarana amin'ny kilasy
TENAA dia mamoaka ireo sary namboarina tamin'ny Red Magic 5G an'ny Nubia